28 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-27T09:40:09+00:00 2018-09-28T00:01:01+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 46 akafirwa, munamati uye mugari wemuHarare. Ndotsvagawo mudzimai anoda zvemba ari pachokwadi. Ada ndibate pa0713 940 004
Makadiiko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 46 ndotsvagawo mudzimai ane vana 2 anoda zvemba. Ndinobatika pa0715 419 494.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 nevana vaviri, ndotsvagawo mudzimai ane makore 20 – 28 ane mwana kana asina. Anoda ngaandibate pa0772 407 604.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mukadzi wekuroora, ndine makore 33 uye ndoda asina utachiona. Ada anondibata pa0783 010 446.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 21 asiri pachirongwa. Nhare yangu 0774 523 188.
Makadii zvenyu? Ini ndiri mudzimai ane mwana 1, ndoda murume ane rudo ane makore 46 – 50. Anondifarira ngaandibate pa0748 639 554, ndiri muHarare.
Ndiri mukomana ane makore 22 okuberekwa, ndinotsvakawo musikana wekuzoroora ari pachokwadi kubva pamakore 18 zvichienda mberi. Nharembozha dzangu idzi 0739 425 625.
Tishamwaridzane makadii? Ndiri murume ane makore 45, ndinoda mukadzi asina kumboroorwa nekuti ini handina kubvira ndaroora. Nhare yangu 0782 458 488.
Ndiri mukomana ane makore 19 ndinogara kuChivhu uye ndiri kudawo zvakare musikana anogara kuChivhu. Andifarira ngaandibate pa0776 581 063.
Ndiri kutsvaga mudzimai ane makore 19 kusvika 30. Ndiri murume ane makore 36, handinwe doro nekuputa fodya. Ndinoda akasununguka kusara nemwana wangu newake ndichienda kubasa. Afarira baAshley vanowanikwa pa0719 796 830 chero nguva masikati kana usiku.
Ndotsvagawo murume ane makore 34 kusvika 45, ini ndine makore 32 nemwana 1. Ndiri pamushonga asi hazvioneke. Andifarirawo ngaandibate pa0777 026 577.
Makadii veKwayedza? Makaita basa vanhu ngavachirega kufona pa0715 794 239 nekuti zvangu zvakaita.
VeKwayedza makadii? Murume ane makore 51, HIV+, anogara kumusha anodawo mukadzi anoda zvekumusha. Nhamba 0712 103 669.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 22 handisi pamushonga uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 20. Ari pachokwadi ndapota, pfambi kwete. Ngaave akanaka, anoda imba uye ane mazirudo. Kana pane anondida ngaandibate pa0716 242 218.
Makadi? Ndiri murume ane makore 41, ndodawo mukadzi wokuwana ari pamushonga ari kuKwekwe. Anoda anondibata pa0779 135 213.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndinodawo mudzimai anoda zvemba. Ngaave anonamata ane makore 20 – 26. Andida ngaandibate pa0782 459 711, zvizhinji totaura.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvaga musikana ane makore 18 -22 anogara muHarare achipinda AFM ari HIV negative. Anondida ndibate pa0782 476 062.
Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 25 zvichidzika chero ane mwana uye asiri pamushonga. Vari pachokwadi ndibatei pa0771 675 652.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ane makore 18 kusvika 24 asina mwana. Nhamba dzangu 0715 586 304.
Makasimba here? Ini ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo musikana wekuroora asina chirwere. Ngaandibate pa0718 355 665, ndatenda.
Ndiri murume ane makore 46, ndine vana 3 uye ndotsvagawo mukadzi ane makore ari pasi peangu. Ngaave HIV negative seni. Vada rovai nhare pa0715 379 029.
Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoda musha ane makore 50 zvichienda mberi. Matsotsi musafone zvenyu ndapota. Nhare yangu 0735 988 127.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana anoda zvemba uye anoenda kuchechi. Ngaave akanaka pachiso nepamwoyo ane rudo. Anondida ngaandibate pa0785 412 965.
Ndiri murume ane makore 32 nemwana 1, handishande asi ndodawo mukadzi anoshanda basa riri nani asina mwana kana ane 1. Anoda ngaandibate pa0773 586 669.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 25. Andifarira ngaandibate pa0773 871 844.
Kwaziwayi veKwayedza? Ndiri murume anodawo mukadzi ane makore 29 kusvika 36. Ndinoda mupurisa kana mukoti, akarongeka ane twunhu twake. Asiri pamushonga ndibate pa0777 895 840.
Ndiri musikana wemakore 18, ndodawo mukomana ane makore 23 zvichidzika anoshanda asiri pamushonga. Nhamba 0771 959 152, ndatenda.
Ndiri murume ane makore 37, ndotsvagawo shamwarikadzi yokuwadzana nayo isina chirwere. Ndinoshanda uye ndobatika pa0778 338 701.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 29 ndotsvakawo musikana wekuroora ane makore 19 kusvika 24 asiri pamushonga uye asina mwana. Anoda nezvangu ngaandibate pa0778 154 366.
Ndiri murume ane makore 30, ndogara Chiredzi uye ndinodawo mukadzi wekuroora akavimbika. Anenge ada nezvangu ngaandibate pa0783 112 416.
Makadini? Ndingafara kana mukabuditsa shambadzo yangu. Zita rangu ndinonzi Tafadzwa, ndiri kutsvaka mukadzi anoda zvemba asi vanoda kutamba kwete. Andifarira ngandibate pa0783 112 416.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 20 nemwana wangu 1, ndoda murume ane makore 26 – 32. Handisi pamushonga. Ndinoshanda basa rakanaka kwazvo. Ndakanaka saka ndodawo murume anoshanda ane mari dzake. Andifarira ngaandibate pa0785 661 495.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35. Ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba wekuChitungwiza ane makore 25 – 28. Ane mwana 1 kana asina ngandibate pa0783 577 236.
Ndiri musikana ane makore 20 ndotsvagawo murume wekufambizana naye. Vanoda ndibatei pa0784 091 959.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye akanaka nekuti ini ndakanakawo. Ndinoshanda muHarare asi vakadzi vevanhu kwete. Ndinobatika pa0784 508 400.
Ndiri murume ane makore 38, handina utachiona hweHIV uye ndinodawo musikana wekuroora. Nhare yangu 0779 661 450.
Ndodawo mukadzi ane makore 30 – 37 akavimbika asina chirwere. Ndine makore 40, ndogara kwaSeke. Zvizhinji totaura sms kana kufona pa0783 932 929.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 18 – 22 anoda zvemba. Ini ndine makore 23, andida anondibata pa0715 794 239. Ndapota handidi anonditambisira nguva yangu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 22 anoda zvekuvaka musha. Ari pachokwadi andida anondibata pa0715 794 239.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvaga mukadzi wekugara naye ane makore 18 – 23 ari pamushonga. Andida ngaafone pa0772 221 795. Kana masms ndopindura, buritsai mwadhi yangu.
Ndiri mukomana ane makore 27, HIV negative uye ndinotsvagawo musikana mutsvuku akanaka ane makore 18 kusvika 21. Ndinowanikwa pa0773 190 577.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 35 nevana 2, ndinotsvagawo murume ane makore 40 – 50 anonamata. Anenge andifarira anondibata pa0783 248 373.
Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa, ndakamboroora uye ndine mwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ngaave ane makore 21 kusvika 27 aine mwana 1 kana asina. Ndinogara muHarare, doro nefodya handibate. Nhare yangu 0713 232 574. Makasununguka kufona chero nguva vari serious chete, status HIV negative.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 kusvika 25. Adida anondibata pa0776 786 999.
Makadii henyu? Ndiri mukadzi ane makore 36 ndotsvagawo murume ane makore 40 zvichienda mberi ari pamushonga. Ndiri muHarare, andifarira ndobatika pa0783 887 009.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 26, handina mwana uye handina chirwere. Ndoda murume ari serious ane makore 28 kusvika 35 asina mukadzi.
Anoda nezvangu ngaandibate pa0771 869 794.